छविराज ओझा पछि रेखाले पाईन फेरी नया यात्री,नया चलचित्रमा रेनशाको इन्ट्री,कस्तो होला सहकार्य ? – Etajakhabar
छविराज ओझा पछि रेखाले पाईन फेरी नया यात्री,नया चलचित्रमा रेनशाको इन्ट्री,कस्तो होला सहकार्य ?
रेखा थापाले नयाँ फिल्म निर्माणको घोषणा गरेकी छिन् । रेखा फिल्मसबाट बन्ने छैटौं फिल्मलाई रेनशा राई राणाले निर्देशन गर्नेछिन् । शुक्रबार मात्रै रेखा फिल्मस् र रेनशाबिच सम्झौता भएको हो । आज निर्देशक राईको जन्मदिन पनि हो ।
मल्टीस्टारर फिल्मका लागि अभिमन्यू निरवीले स्क्रिप्ट तयार पार्दैछन् । स्क्रिप्टमा काम हुँदै गरेकाले फिल्मको नाम तय भैनसकेको रेखाले बताइन् । ‘कथा अनुसार फिल्मको नाम राखेर स्क्रिप्टको डिमान्ड अनुसार कलाकार छनोट गर्नेछौं’, रेखाले भनिन्, ‘आम दर्शकलाई मन पर्ने फिल्म बनाउँछौं’ । यता जन्मदिनकै दिन नयाँ जिम्मेवारी थप भएको निर्देशक राईले खुसी व्यक्त गरिन् । ‘यो मेरो लागि रेखा फिल्मसको उपहार र जिम्मेवारी हो’, रेनशाले भनिन् ।
करिब एक दशक देखि कोरियोग्राफरको रुपमा काम गरेकी रेनशाले गत वर्ष ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ फिल्मबाट निर्देशनमा डेब्यू गरिन् । रेनशा आइकोर फिल्मसबाट बन्ने नयाँ फिल्म ‘आइएम ट्वान्टी वान’को तयारीमा पनि जुटिरहेकी छिन् । रेखाले भने पछिल्लो पटक फिल्म ‘मालिका’ निर्माण, निर्देशन र अभिनय गरेकी थिइन् । रेखा र रेनशाको सहकार्यमा कस्तो फिल्म बन्ला त ?
Posted on: Friday, July 12, 2019 Time: 13:46:44
पुरै शरीर नचल्ने बिक्रम भेट्न अमेरिकाबाट ८० बर्षिय बुबा आए,बिक्रमको अबस्था देखेर रुवाबासी
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाइ फेरी अर्को बज्रपात
कृष्ण ओलीको भन्दा बढी पिडा र उस्तै नमुना जोडी भएका बिक्रमले लगाए दशैंटिका,माइती सम्झेर रोइन मनु
नेपथ्य ब्याण्डको ‘खान्न म त लाम्पाते सुरति, लाउँ कि नलाउँ जुग जाने पिरती’ को म्युजिक भिडियो यस्तो बबाल बनेर आयो (भिडियोसहित)
आयो करिश्माको काखमा शिशु !
छोरा तैमुरको सुरक्षाका लागी मात्र पाँच जना बडी गार्ड राखेकी छन् करिना कपुरले
दशैको मुखमा विदेश गएका श्रीमानको श’व घरको आगनमा आइपुग्दा….
ऐश्वर्या रायको यो लुक देखेर रिसाए डिजाइनरः भने, ‘संसारकै सुन्दर महिलाको यस्तो हाल…’